Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » ndị mmadụ » Mmeri ụlọ ikpe ọzọ na Seychelles nke Alain St. Ange
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • ndị mmadụ • Akụkọ gbasara Seychelles
Alain St.Ange, otu n'ime mmadụ atọ na -azọ ọkwa onyeisiala Seychelles 2020 bụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị nwere nkwuwa okwu bụ Alexander Pierre tupu ntuliaka 2020. Mkpesa mkparị iji mebie ụdị onye njem nlegharị anya nke batara n'ọsọ onye isi ala iji nye Seychelles ụzọ ọ ga -esi pụọ n'ihe ịma aka akụ na ụba ya 'na okwukwe ọjọọ, dị njọ na ụgha nakwa na enweghị ezi ihe ngọpụ maka mbipụta' Alexander kwuru. Pierre n'arịrịọ ịrịọ ya nyefere n'Ụlọikpe Kasị Elu nke Seychelles.
Alain St.Ange dị na Seychelles meriri okwu mkparị megide Alexander Pierre maka ọkwa ntuli aka onye isi ala.
Na Fraịdee 3 Septemba Alexander Pierre kwetara ụgwọ ma nyefee ya na ikpe wee nabata ịkwụghachi Mr St.Ange ụgwọ ụlọ ikpe ya na ụgwọ iwu karịa karịa akwụkwọ ozi mgbaghara nke ọ na -ekweta ịkwa ụta maka ọkwa ya mere na Ọktoba 2019 na -ekwu na ha mere ihe ọjọọ. okwukwe, nakwa na ha bụ ndị obi ọjọọ na ndị nkwutọ.
Maazị Alexander Pierre gara n'ihu kwupụta n'akwụkwọ mgbaghara ya nyefere onye ọka ikpe Gustave Dodin n'ụbọchị ikpe na "Ana m ekerịta oke iwe na ihe arụ nke Maazị St.Ange kwupụtara. Ekwetara m na ọ bụ ihe na -ezighi ezi na enweghị mmasị na ya ibipụta ya ".
Ọ bụ onye ọka iwu Frank Elizabeth onye pụtara maka Alain St.Ange na Basil Hoareau maka Alexander Pierre.
Frank Elizabeth, onye ọka iwu maka Alain St.Ange gwara ndị nta akụkọ gbakọtara na mpụga ụlọ ikpe Kasị Elu nke Seychelles na ebubo a emetụtala na ntuli aka nke St.Ange nke mere eji achọ ikpe na mgbaghara n'ụlọ ikpe.
Alain St.Ange onye meriri ntaramahụhụ dị ka izu ole na ole gara aga megide Gọọmentị Seychelles n'Ụlọ Mkpegharị Mkpegharị maka iwepụ onye isi ala mbụ Danny Faure nke akwụkwọ nkwado ya nke bụ ihe achọrọ maka ntuli aka UNWTO 2017 maka ọkwa onye odeakwụkwọ ukwu kwuru. mmeri ọhụrụ a iwu kwadoro na ọ dị mkpa ịgakwuru ndị ọka ikpe mgbe ihe niile dara. St.Ange kwuru na "Ụlọ ikpe ka bụ onye na -elekọta ikike anyị niile" tupu ịgbakwụnye na ịtụgharị na ha ga -anọgide na -eme ihe mgbe mmadụ were iwe wee chee na e mesoro ya ihe n'ụzọ na -adịghị mma.
Alain St.Ange bụ onye a họpụtara ịbụ onye omebe iwu nke Seychelles maka ọrụ abụọ tupu ahọpụta ya onye minista gọọmentị. Ugbu a ọ bụ onye na -ahụ maka njem nlegharị anya na onye a na -akpọkukarị ka ọ gaa nzukọ ogbako njem ebe ọ na -aga n'ihu na -enwe ahụ iru ala ikwu okwu na enweghị isi.
Ihe onyonyo foto:- Frank Elizabeth na onye ahịa ya Alain St.Ange na Alexander Pierre na onye ọka iwu ya Basil Hoareau na-agwa ndị nta akụkọ gbakọtara n'Ụlọikpe.